Gemstone scam. Hazvifaniri sei kubvarurwa nokutenga ibwe?
Asingasviki 1 ct
1 kusvika 2.99 ct
3 kusvika 4.99 ct
5 kusvika 6.99 ct
7 kusvika 9.99 ct
10 kusvika 14.99 ct
15 kusvika 19.99 ct
20 kusvika 49.99 ct
Vanopfuura makumi mashanu ct
Kukadzi dombo rekuzvarwa
Kurume dombo rekuzvarwa
Kubvumbi dombo rekuzvarwa
Chivabvu dombo rekuzvarwa
June dombo rekuzvarwa
Chikunguru dombo rekuzvarwa
August dombo rekuzvarwa
Gumiguru dombo rekuzvarwa
GEMOLOGY KUSANGANA NESHURE
Gemstone nematombo vatengesi vanoshandisa akawanda mahunyanzvi kukugonesa iwe kuti utenge. Izvo hazvina basa kana uri murombo kana mamioneya. Ivo vanoziva nzira yekuwana nzira yekukugonesa iwe. Ivo vari kukutarisa kusvikira vaona nyeredzi dzakatanga kupenya mumaziso ako. Ivo vanokunyepedzera, kuti uite kuti iwe ubvise iyo mari yaunayo muhomwe yako.
Vatengesi vematombo havasi gemologists
99.99% yevatengesi vematombo havasi gemologists. Ivo vatengesi, ivo vakadzidziswa kutengesa mabwe kwemaawa mashomanana kana mazuva mashomanana, zvakanakisisa. Iwe hauna shamwari ipapo. Vanotarisa kwauri senzira yekuita mari.
Nzira yakanakisa yekutenga dombo kana chishongo ndeyekusateerera nharo dzevatengesi, chete kuvimba pane zvaunoziva nezvaunoona. Vatengesi havamire kukubata iwe pamoyo, kuti vafambe newe. Saka, ramba, teerera kune yako inonzwisisika pfungwa.
Zvikwereti muzvitoro zviduku
Ngatitangei nehunyengeri muzvitoro zvidiki, mumigodhi kana munzvimbo inogadzira matombo.
Heano mimwe mienzaniso
Kana mutengesi achikupa mutengo wejeri kana dombo, uye pakarepo unopa kupa mutengo muhafu, iwe unofanirwa kumhanya.
Zvibvunze kuti: kana ukaenda kuresitorendi, kutenga imba, mumwe yakagochwa huku kana kumicheto kuti mushonga wemazino, iwe uchava akabayira 50% dhisikaundi pasina promotional signage? Mhinduro yacho kwete. Izvo hazviiti kuti zvive nekunzwisisa, hazvina basa kana dombo iri rechokwadi kana rhema, iwe uchabviswa.
Dombo rinopenya, kupisa kwematombo, kupisa mabwe kune mumwe, nezvimwewo.
Zvose izvo hazvina maturo. Zvichida kuti makemikari ebwe rinoita zvakafanana nedombo rechisikwa. Ichaita sezvinoitwa ibwe rechokwadi kune zvose zvese zvavanoedzwa.
Enzanisa ibwe rinogadzirwa kune rimwe girazi
Kuti vakunyengere, vatengesi vanofananidza dombo rekugadzira negirazi regirazi. ngatitaurei semuenzaniso weRuby. Ruby ibwe dzvuku kubva kumhuri yekorundum. Iyo kemikari inogadzirwa inonyanya aluminium oxide. Rubatsiro rwekugadzira inogadzirwawo nemakemikari akafanana seicho chaicho. Ivo vanozoita nenzira imwecheteyo kune ese miedzo yauchazoratidzwa iwe. Vatengesi vanoenzanisa mabwe maviri: synthetic ruby nechidimbu chegirazi dzvuku. Kutsanangura kuti aya mabwe maviri akasiyana, iro girazi ibwe rekunyepedzera uye iro rekugadzira ruby ibwe chairo. Asi inhema. Matombo ese ari maviri ndeenhema uye haana kukosha, kana.
Zvikwangwani mune zvitsuwa zvakanakisa
Iye zvino, muenzaniso wechitoro chakanaka, nzvimbo yepamusoro yepamusoro, nzvimbo yekutengesa kana hofari.
Vatengesi havazoedzi kukukurudzirai kuti matombo ndeechokwadi kuburikidza nekuedzwa kwemawe kana kuti kutengesa kwekutengeserana. Nzira inoshandiswa munyaya iyi inonyanya kuvanzika: maitiro uye zvikamu zvemirimi.
Ndiani aizofungidzira kuti chitoro chine maitiro akaisvonaka, akazara nevatengesi vakapfeka zvakanaka uye vakadzidza, ari kutengesa zvinhu zvisiri izvo?
Ita mamwe maedzo kuburikidza nekubvunza mibvunzo. Kana iwe ukanyatsoteerera mhinduro dzacho, iwe unonzwisisa mitsetse iyoyo zvakanaka kunyora pamusoro. Kungofanana nemhinduro dzevashumiri vanomhanya, kanawo kudana nzvimbo yevashandi.
Mubvunzo 1: Iwe unotengesa mabwe echisikiro here?
Pindura: Madam, Iko iko kristini chaiye.
Izwi rekuti "crystal" mu gemology rinoreva chinhu chakajeka. Izvi hazvireve kuti dombo nderechisikigo kana rakagadzirwa.
Mubvunzo 2: Isimbi ine sirivha here?
Pindura: Madam, isimbi yakakosha.
Haana kuti "hongu" kana "kwete". Haana kupindura mubvunzo wako.
Izwi rekuti "simbi yakakosha" harine zvakare zvinoreva zviri pamutemo. Muchokwadi, chitoro ichi chinotengesa zvishongo zvakagadzirwa nesimbi alloy iyo isina sirivheri, goridhe, kana chero simbi yakakosha.
Sezvaunogona kuona, hapana nzira inoshamisa yekudzivisa kuparadzaniswa. Unhu hwenyu hunozivikanwa ndiyo yekudzivirirwa kwako kwakanakisisa.
Kana iwe uchifarira uyu musoro wenyaya, uchida kuenda kubva kudzidziso kuti uite, tinopa gemology courses.
USD: United States (US) dhora ($)
AED: Zimbabwe Dollar dirham (د.إ)
Zvose: Albanian lek (L)
AOA: Angolan kutanga (Kz)
AUD: Dhora reAustralia ($)
AZN: manat Azerbaijani (AZN)
BAM: Bosnia neHerzegovina convertible mark (KM)
BBD: Barbadian dhora ($)
BIF: Burger yeBurundi (Fr)
BMD: Bermudian dhora ($)
BND: Brunei dhora ($)
BOB: Bhovianvian boliviano (Bs.)
BRL: chaiye weBrazil (R $)
BSD: Bahamian dhora ($)
BWP: Zimbabwe pula (P)
BZD: Belize dhora ($)
CAD: Canadian dollar (C $)
CDF: Kongo Franc (Fr)
CRC: Costa Rica colon (₡)
CUC: Cuban inoshandurwa peso ($)
CUP: Peso yeCuba ($)
DJF: Djibouti franc (Fr)
EGP: Pound yeEgypt (EGP)
ERN: Eritrea nanfa (Nfk)
ETB: Itiopian birr (Br)
FJD: Fijian dhora ($)
FKP - Falkland Islands paundi (£)
GBP: Pound yakaenzana (£)
GEL: ChiGeorgia lari (₾)
GGP: Guernsey paundi (£)
GIP: Gibraltar paundi (£)
GMD: Gambia dalasi (D)
GYD: Dhora reGuyanese ($)
HKD: Hong Kong dhora ($)
HRK: Croatian kune (kn)
ILS: Israeli itsva shekeri (Israeli)
IMP: Manx paundi (£)
Indian Rupee (INR) Kuti Indian Rupee (INR) mutengo uri mupenyu chati
IQD: Iraqi dinari (ع.د)
JEP: Jersey paundi (£)
JMD: Jamaican dhora ($)
Jordan Dinar (JOD) Kuti Jordan Dinar (JOD) mutengo wekare chati
JPY: yen yeJapan (¥)
KGS: Kyrgyzstani som
KPW: North Korea yakahwina (₩)
KRW: South Korea yakunda (₩)
KYD: Cayman Islands dhora ($)
LBP: Lebanese paundi (ل.ل)
LRD: Dhora reRiberia ($)
MAD: Moroccan Dhamham (د.م.)
MKD: Kuwaiti Dinar (ден)
MUR: Uruguayan Peso (₨)
MWK: Zimbabwean Kwacha (MK)
MYR: Malaysin ringgit (RM)
NAD: Dhora reNamibia (N $)
NGN: Naira yekuNigeria (₦)
NOK: ChiNorway krone (kr)
NZD: New Zealand dhora ($)
OMR: Ruva reOmani
KWD: Philippine Peso (₱)
PYG: Paraguayan guarani (₲)
QAR: Zvita Qatari Riyal (ر.ق)
RWF: Zimbabwe franc (Fr)
SBD: Solomon Islands dhora ($)
SDG: Pondo yeSudan (ج.س.)
SEK: Krona yeSweden (kr)
SGD: Singapore dhora ($)
SHP: Saint Helena paundi (£)
SLL: Sierra Lean Leone (Le)
SOS: Mari yekuSomalia (Sh)
SRD: Dhiramu yeSurinamese ($)
SYP: Paundi yeSyria (ل.س)
TJS: Tajikistani somoni (MM)
TND: Kuwaiti Dinar
TOP: ChiTonga paʻanga (T $)
Edza: Turkish lira (₺)
TTD: Trinidad neTobago dhora ($)
TWD: Nyowani Taiwan dhora (NT $)
TZS: Shill yekuTanzania (Sh)
UAH: Chiukraine hryvnia (₴)
UGX: Uganda shill (UGX)
VEF: Venzuelan bolívar (Bs F)
VUV: Vanuatu Vat (Vt)
WST: Samoan tama (T)
XCD: East Caribbean dhora ($)
ZAR: Randi reSouth Africa (R)